လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ပြင်သစ်ခရီးသည်လေယာဉ် ဘရာဇီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ပျောက်သွားခြင်း
ပြင်သစ်ခရီးသည်လေယာဉ် ဘရာဇီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ပျောက်သွားခြင်း
လေကြောင်းအရာရှိများက ခရီးသည် ၂၂၈ဦး တင်ဆောင် ထားသည့် ပြင်သစ်လေယာဉ်သည် ဘရာဇီး ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းအလွန်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းဖြင့် ပြောဆို ပါသည်။
ပြင်သစ်လေကြောင်းက CNN ကို ပြောကြားရာ၌ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၊ ချားလ်ဒီဂေါလေဆိပ်သို့ ဘရာဇီး နိုင်ငံ၊ ရီယိုဒီဂျနေရိုမှ ၁၁ နာရီကြာ ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်က်ုိ ပျံသန်းနေသော ဂျက်လေယာဉ်နှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားကြောင်း ဖြင့် ဆိုပါသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ အစိုးရသတင်းဌာနမှ ပြောကြားရာ၌ ဘရာဇီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ၃၆၅ ကီလိုမီတာ (၂၂၆ မိုင်) ဝေးသော အက်တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ဖာနန်ဒိုဒေနိုရုံးဟာ ကျွန်းစုအနီးတွင် ဘရာဇီး လေတပ်မှ ရှာဖွေနေကြောင်းဖြင့် ဆိုပါသည်။
ပြင်သစ်လေကြောင်းက လေယာဉ်ခရီးစဉ်အမှတ် အေဖက် ၄၄၇ သည် လေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၂ယောက်အပြင် ခရီးသည် ၂၁၆ယောက်ကို သယ်ဆောင်ပျံသန်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ လေယာဉ်အမျိုးအစား မှာ Airbus A330 ဖြစ်ပါသည်။
လေကြောင်းလိုင်းက သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုများနှင့်အတူ ထပ်တူစိတ်လှုပ်ရှားပူးပန်ရပါကြောင်းနှင့် လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပါရှိသွားသည့် ခရီးသည်များ၏ ဆွေမျိုးနှင့် သူငယ်ချင်းများကို သီးသန့်နေရာသို့ ထားရှိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဆိုပါသည်။
ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁း၁၅ နာရီတွင် လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်မှုမရှိလာသောအခါ၌ ချားဒီဂေါ လေဆိပ်တွင် ပြဿနာဖြေရှင်းရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပြင်သစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီး ဂျင်းလူးဝစ်ဘောလူ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Agence France- Presse က ပြောကြားရာ၌ လေယာဉ်ကို အပိုင်စီးမှု လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြင့် ဆိုပါသည်။
Agence France-Presse သို့ လေကြောင်းပျံသန်းရေးအရာရှိက ပြောကြားရာ၌ မိမိတို့လွန်စွာမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နေရပါကြောင်း၊ လေယာဉ်မှာ လွန်ခဲ့သော နာရီများစွာက မြင်ကွင်းခွက်(Screens) များ ပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက် လက်ခံပေးပို့မှု ပြဿနာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယခုလိုချို့ယွင်းမှုမျိုး ဖြစ်ခဲပါကြောင်းဖြင့် ဆိုပါသည်။
ပျောက်ကွယ်သွားသည့် လေယာဉ် Airbus A330 သည် အင်ဂျင်(၂)လုံးတပ် ခရီးရှည်သွား လေယာဉ် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် စီးပွားရေးအရ ပျံသန်းမှုကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာသုံးသပ်သူ Kieran Daly က CNN ကို ပြောကြားရာ၌ လေယာဉ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည့် ဘေးဆိုး တစ်စုံတစ်ခု ကျရောက်သွား ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
၎င်းက Airbus A330 အမျိုးအစားမှာ လေကြောင်းပျံသန်းရေးစံနှုန်းအရ အလွန်နုသည်ဟု ဆိုပါသည်။ A330 သည် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အလွန်စိတ်ချရသည့် General Electric ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်များကို အသုံးပြုထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
CNN လေကြောင်းသွားလာရေး ကျွမ်းကျင်သူ Richard Quest က လေယာဉ်မှာ အက်တစ်လန်တစ် သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး စံနမူနာပြုစရာ ဘေးကင်းစွာ ဖြင့် ပျံသန်းခဲ့သော မှတ်တမ်းရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် ယခုပျံသန်းသည့် အကွာအဝေးမှာ ဘေးကင်း သည့် အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် ပျံသန်းမှုကျွမ်းကျင်မှုအတွက် လူသိများသည်ဟု ဆိုပါသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, June 01, 2009
I saw that news in channel new asia lastest news. How come disappeared? So strange. I really worry for all the ppl onboard in plane.
June 1, 2009 at 9:16:00 PM GMT+6:30
ကဗျာစာအုပ်လေးလည်း ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။ အားထုတ်ထားတာကို သဘောကျကြောင်းနှင့် တစ်ချို့ကဗျာလေးတွေကိုလည်း နှစ်သက်ကြောင်းပါ။
June 2, 2009 at 11:15:00 AM GMT+6:30
ရင်မောစရာပါလားနော် .. ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမယ်မသိဘူး
June 2, 2009 at 12:40:00 PM GMT+6:30
ဗာမြူဒါတြိဂံလိုများ ဖြစ်သလား မသိနော် ငယ်ငယ်က သိပ္ပံမဂဇင်းတွေမှာ အမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်
June 2, 2009 at 7:22:00 PM GMT+6:30